Carfts Card ကို 3D Embossed Card, ဖောင်းကြွ Card ကို, Embossed Craft Card, Embossed Effect Card, Embossed Plastic Card, Embossed PVC Card, micro-ကယ်ဆယ်ရေး Card ကို, Micro-relief Plastic Card, Microreliefs Card, RFID ဖောင်းကြွ Card ကို, Three-dimensional Embossed Card
protocol စံ: ISO ကို 14443A / က ISO 15693 / က ISO 18000-6C
RF chip ကို: ml S50, M1 S70, MF ULT10, MF ULT ကို C, EM4102, EM4200, EM4305, TK4100, T5577, FM11RF08, ဂြိုလ်သား h3, etc.
Cardbody ပစ္စည်း: PVC
အတိုင်းအတာ: ISO7816 CR80 85,60 × 53,98 × 0.80mm သို့မဟုတ်ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီ
base လွှာချင်းဝက်: 3.18± 0.3mm.
Types of microreliefs: word convex, side convex, line convex, grain convex and full convex. ဥပမာ, LOGO convex, pattern convex.
ဝင်ခွင့်လက်မှတ်, အသုံးပြုခွင့်ကိုထိန်းချုပ်မယ်, channel gate control, လက်ဆောင်ပေးမယ်, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဒ်, ကုန်တိုက်ကြီးတွေလျှောက်ထား, ဟိုတယ်တံခါးကိုကဒ်, ဘား, စားသောက်ဆိုင်, ကဖေး, ရုပ်ရှင်ရုံ, အလှပြင်ဆိုင်, အသားတင်ကဖေး, ဂိမ်းကအခန်း, ဝန်ဆောင်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်အခြားဒေသများ.
I am interested in your product Embossed Card, micro-ကယ်ဆယ်ရေး Card ကို, RFID ဖောင်းကြွ Card ကို
prev: RFID စမတ်ကဒ်ဦး Disk ကို, USB မှ Flash ကို Disk ကိုစမတ်ကဒ်
နောက်တစ်ခု: Wiredrawing Card ကို, Wiredrawing ရုပ်ရှင်ပွဲတော် Card ကို, RFID Wiredrawing Card ကို
Wiredrawing Card ကို, Wiredrawing ရုပ်ရှင်ပွဲတော် Card ကို, RFID Wiredrawing Card ကို
RFID Card ကို (150)
လုံခြုံရေး ID ကဒ် (6)
JAVA ကဒ် / CPU ကိုကတ် (16)
Carfts Card ကို (8)
အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်း Card ကို (14)
အခြားအမျိုးအစားကဒ် / တံဆိပ် (20)
RFID အင်းလေး (16)
RFID ဆကျကပျ Tag ကို (87)
ESL ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်း Tag (8)
သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံ Tag ကို / ဘိလပ်မြေ Tag ကို (9)
အခြားအ Dedicated Tag ကို (29)
လက်ပတ် / လက်ကောက် (26)
LF / HF Reader ကို (28)
လှိုင်းနှုန်းသည် UHF Reader ကို (19)
module / အင်တင်နာ (26)
အခြားအ IoT ထုတ်ကုန်များ (12)